Cilmi iyo caado!
Oraahda cilmi iyo caado waxay aheyd cinwaan riwaayad culys badan lahad oo abwaan soomaaliyeed u hagar baxay fariin iyo hoga tusaaleyn aan la qiyaasi karina bulshadiisa ugu soo gudbiyey.
Waxaan marka anna oraahdaas usoo qaatay ujeedooyinka badan ay xanbaarsantahay awgeed oraahdu marka laga reebo isku xiraha waxay ka kooban tahay laba magac u yaal oo mid waliba sifihiisa iyo suuradiisa u goonida ah leedahay hadana waa isu dheelitirmaan isdhisaan isuna dheelalyoodaan.
Waa dhawaaq marka uu dhegaha soo gaaro dareen iyo dhugasho horleh abuura caado waa habnololeed ka abuurma halganka nololeedka bulsho ee meel ku dhaqan ,waa hanaan xaliya xubnaha xeerka looga samato baxi dhiibaatada xiligaa ,waana xididka ay raacdo bulshadu markay rabto inay dib u xisaabtanto si ay tagtaddii cashirka ay kabaratey timaadada ugu tooghayso.
Hadaba marka ay caadi taa tahay cilmina waa curuqda dhiiga waraabiya waa cunnada iyo cabidda ay caado ku ciidamiso waa curiyaha kobciya cadceeda u kala cadeysa halka calaacasha dhigi lahayd geedi socodka xigtada ah ee waqtiga iyo waayaha la xiriira.
Cilmigu waa kan bulshada u horseeda badalida iyo bilidda baalaha madow aay bulsho ka dhaxasho caadadeeda hore ,waa hogaanka hayinka nolosha tubta hagaagsan u horseeda.
Cilmigu waa mid ay diinteena suubani meeqaan aad u sareeya siisay nabigeenii suubanaa Maxamed ahaa iyo anbiyadii oo dhami aad noogu booriyeen raadin tiisa, barashadiisa iyo ku dhaqankiisaba.
Hadii marka ay cilmi iyo cadi yihiin isku dhiskaas aan kala maarmin ee isku hayb iyo hide aroora miyaysan habooneyn in aan himilo gaar ah siino mid walbana kan kale habsamaanta uu halbowleyyaashiisa u habayo hawraar teeda gaarka ah iyo tooda guudba ay qaadaano.
Cilmigu waa cad, ceyn kastuu yahay dhaxyaal noolaha ,miyeysan habooneyn in aan u maalo sida hasheena maandeeq, si aan mugdiga,miscilisha, faqriga iyo meelaha madoow ay caadadeenu maalmo tagey ku xalisay mashaakilkeed annagana uga gudubno.
Aniga oo hadaba diinteena suuban iyo caadadeena inteeda badan ciribta ku haysaba qiimo iyo qadarin weyn u haya ayaan rabaa in aan bulshadeyda soomaaliyeed u soo gudbiyo dooda iyo dareenkeyga ku aadan gudniinka fircooniga ah ee aan muddada dheer ku soo caana maalnay kaas oo sida aan kor ku soo xusay ahaa xal iyo xeelad xilitagey xujo la gudboneyd bulshadu ku xalisay, haba yaraatee wax sharci iskaam ah aan sal iyo raad toona ku laheyn.
Haddaba miyaaney aheyn aqoon xog ogaalnimo, fahan iyo cilmibaarid dabadeed marka ay culimada caafikaadka aduunka ee casrigeenan maanta joogtaa si cad u qeexeen, dhibaatooyinka laxaadka leh ee caafimaaddaradda, uu falkani sababta kowaad yahay, sida halista dhaawaca ka kaca uu ugu horeeya : ku joogsiga dhiiga oo maanka iyo badankaba caabuq dhaw iyo mid mustaqbalkaba u yeesha iyo weliba nuglaanta ay u nuglaaneyso gabadhu cudurada la xiriira hakashada taranka. Haddaba hadey arintaasi heysto xubnaha ugu muhiimsan ee bulshada oo ah gabdhaheena taranka iyo tiraabta aan ka sugeyno miyaaney aheyn si cad oo wadajir ah uga hortagno innaga oo gacmaha is haysana??
1.Miyaaney aheyn in indheer garadkeena culimada diiniga ah iyo cilmaaniyiinteena inay mawqif cad iska taagaan??
2. Miyaaney aheyn in abwaaniinta iyo inta ereygooda ummadeenu u dhaga nugushahayba ku baraarujiyaan bulshadeena ciribtirka caadadan fircooniga ah?? Taas oo aan dhab ahaan qabo xataa inay diiniyan ku wanaagsan tahay in aan khilaafno dhaqankii fircoon.
3. Miyaaney ku habooneyn in qalinka iyo qawlkuba qalaan qeexaan qiraan in qasaarihiisu aad uga badan yahay qiinmahiisa, wax qiil ahna uusan ku laheyn diinteena muqadiska ah.
4. Miyaaney habooneyn in aynu qeexno dhaqanka gudniinka sunnaha ah xaduudka uu leeyahay?.
Marka hadii aan isla qirsannahay arimaha aan kor ku soo xusay oo dhan waxaan codsaneynaa aniga oo ku hadlayaa magaca ragga iyo dumarka soomaaliyeed ee maskaxda, muruqa iyo maalkaba u huray wacyi galinta falka isaga ah iyo wax u sheegga dadkeena gaar ahaan aqoon yahanka iyo indheer garadka iyo guud ahaan ummadeena somaliyeedba meelkasta ay joogaan in ay gacan iyo garabba ka geystaan la dagaalanka iyo dabargoynta falkan fircooniga ah.
Waxaan hadalkeyga ku soo gunaanudayaa guusha iyo mira gurshadu waa mid u soo hoyaneysa umadeena ku dheehidda iyo ku dhaqanka cilmiguna waa mid kobcineysa korna u qaadeysa caadadeena soomaaliyeed.
Waa walaashiib Caasha Cumar Geesdiir